Hollywood efu, tebụl kọmputa, tebụl ejiji - Yifan
8 drawer Hollywood Vanity Mirror na Bulbs na Desk Set Black Nke a Hollywood Glam Set nwere ihe niile ị chọrọ na ndị ọzọ. Igwe zuru oke na-enwu enyo na desktọ nke iko iji gosipụta ihe ọ bụla obi gị chọrọ. Enyo ahụ na-enwu ọkụ na-ere ọkụ na draịvụ tebụl ejiri okpokoro okomoko mara mma. Tinye mma ọ bụla ohere a mfe ma pụtara imewe. Ntọala n'ime ime ụlọ gị maka ahụmịhe zuru oke mgbe ị na-etinye ihe etemeete nke gị, na nkwekọrịta nke zuru ezu ...
Ihe oval a mara mma nke oge a, nke yiri enyo enyo na-egosipụta ọmarịcha ihe eji achọ mma na ụkwụ ọla edo pụrụ iche. Ezigbo ezigbo okwute mabụl na enyo oval na-eme ka enweghi ọmarịcha ihe ndị ọzọ. Akụkụ a dịgasị iche iche ga-adị mma na ime ụlọ gị. Lelee mpempe anyị ndị ọzọ site na nchịkọta a maka ịhazi nhazi. Ihe owuwu nke metal, mabul faux, osisi siri ike na Pu Pu na-eme ka nkwado siri ike, ojiji na-adịgide adịgide na ahụmịhe nkasi obi ...
N'oge a, tebụl efu na-eji ihe dị elu dị ọnụ ahịa dị oke ọnụ asọmpi. Ọ dịghị onye ga-egbochi mmadụ ịnweta ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji ihe efu etemeete. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe efu ugbu a, enwere m obi ụtọ igosi ụzọ abụọ. Zụta enyo mgbidi ma debe oche yana dịkwa tebụl iri nri mara mma ma dị mma. Nke ahụ bụ na ihe efu efu gị ga-adịgide. Nke abuo, zuta ihe nhicha nke nwere ihe nchekwa ma obu zụta ihe ole na ole ma jiri ya tog ...
Nkọwapụta NO. YF-D006 Atụmatụ 4 Drawers, 1 keyboard tree Traditiondị ọdịnala ihe onwunwe Melamine osisi Isiokwu DIMENSION 43.3 x 19.68 x 29.52 sentimita asatọ anyị na-akwado OEM nke size MIRROR gụnyere AKWSKWỌ achọrọ akwụkwọ ikike 3 Year Limited (residential), 1 Year Limited (azụmahịa) High gloss acha ọcha elu imecha bụ ihe dị mkpa nke ime ụlọ onye nọ n'afọ iri na ụma, ọfịs ụlọ, ma ọ bụ ebe ọ bụla ọrụ arụmọrụ dị mkpa. I nwekwara ike itinye oche a n'ime ime ụlọ gị, ...
Nkọwapụta NO. YF-D016 FEATURES 1 Drawer, 1 igbe nwere ọnụ ụzọ STYLE dị ugbu a ihe eji eme melamine AKW TKWỌ AKW DKWỌ 120/140 / 160x60x75cm anyị na-akwado OEM nke oke MIRROR gụnyere YESSBBLY chọrọ akwụkwọ ikike 3 Year Limited (residential), 1 Year Limited (azụmahịa) Wuru na nchekwa n'uche, ọ na-enye gị ohere idobe usoro na nhazi na ụlọ ọrụ ụlọ gị. Igosipụta desktọọpụ miri emi, 50 / 60cm, kabinet miri emi na-eme ụlọ zuru oke maka akwụkwọ nzuzo ndị a ...
Nkọwapụta NO. YF-CD006 FEATURES 4 Drawers, 1 keyboard tray STYLE dịkọrọ ndụ MATERIAL melamine board TABLE DIMENSION 120x45x70cm anyị na-akwado OEM nke nha MIRROR D Y EE ​​EE SLỌ Achọrọ AJ WARJ 3 AKA 3 Year Limited (obibi), 1 Year Limited (azụmahịa) Na-egosipụta 4 oghere na-enye ohere. ịchekwa ụlọ ọrụ onunu, Akwụkwọ, faịlụ nchekwa, na ọtụtụ ndị ọzọ obere decorations, The 4-EBIONITISM Nwere ike conveniently-enịm ke ekpe ma ọ bụ aka nri n'akụkụ àjà ...
YF-T10 Nnukwu ihe etemeete ihe efu na ebe nchekwa ...
Nkọwapụta NO YF-T10 FEATURES Nchekwa, Drawers, mbughari Mirror STYLE okomoko & Modern IHE High gloss MDF osisi + igwe anaghị agba nchara ụkwụ Isiokwu DIMENSION 1200 * 500 * 750mm 1000 * 500 * 750mm anyị na-akwado OEM nke nha MIRROR gụnyere EE SLỌ AJ RequJ WAR AJ WARJ Year 3 afọ Limited (obibi), 1 Year Limited (azụmahịa) EXW Ahịa: US $ 0.5 - 9,999 / Ibe (ikwu okwu na ndị ahịa ọrụ) Min.Order ibu: 30Pieces Tụkwasịnụ Ikike: 10000 Ibe / iberibe kwa Mon ...
Nkọwapụta NO. YF-T3 atụmatụ Nchekwa, Drawers, tụgharịa n'elu mirror Ydị okomoko & Oge a ihe elu gloss MDF, Gold plating igwe anaghị agba nchara AKW DKWỌ DIMENSION 900mmL x 400mmW x 750mmH 1000mmL x 400mmW x 750mmAnyị na-akwado OEM nke nha MIRROR G YN Y EZI AKA AKA Achọrọ (obibi), 1 Year Limited (nke azụmahịa)
Nkọwapụta NO. YF-T2 FEATURES Nchekwa, Drawers, Ikanam Mirror STYLE okomoko & Oge a Ihe elu High gloss MDF, Gold plating anaghị agba nchara AKWABKWỌ DIMENSION 800mmL x 400mmW x 750mmH 1000mmL x 400mmW x 750mmH 1200mmL x 400mmW x 750mmH anyị na-akwado OEM nke nha MIRROR INCLUDED Akwụkwọ ikike achọrọ 3 Year Limited (residential), 1 Year Limited (azụmaahịa) EXW Ọnụ: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (kwuo okwu na ndị ahịa) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply ...
Nkọwapụta NO YF-H-802-2 FEATURES Shelves, Drawers, door STYLE Luxury & Modern MATERIAL High Gloss MDF board + Tempered glass + overgild steel nchara TABLE DIMENSION 1200 / 1500mmL * 400mmW * 850mmH anyị na-akwado OEM nke nha MIRROR gụnyere EE ASSEML Akwụkwọ ikike 3 Year Limited (residential), 1 Year Limited (azụmahịa) EXW Ọnụ: US $ 0.5 - 9,999 / Ibe (kwuo okwu na ndị ahịa ọrụ) Min.Order ibu: 30Piece Tụkwasịnụ Ikike: 10000 Ibe / Pieces kwa ...
Dị ka aha ya si dị, okpokoro kọfị anyị dị n'etiti narị afọ gara aga na-egosipụta mmapụta iji kpughee oghere nchekwa zoro ezo. A na-emeju ihe mkpuchi ukpa ya site na akwukwo marble maka uzo ozo di egwu - nke zuru oke maka ichota akwukwo n'oge ozo gi. Bulie tebụl kọfị dị n'elu na-enye ụbara ịke na nchekwa maka ebe obibi gị ọgbara ọhụrụ. Ngwakọta ngwakọta ya nke ihe na-agbakwụnye mmetụ nke ịhụnanya yana ịcha mma mara mma nke ime ụlọ gị site na ọka na-eji ire ụtọ na glos ...
YF-H-901 TV Guzosie 3-Igbe Media Guzosie na Gol ...
Nkọwapụta Ọ dịghị YF-H-901 atụmatụ Drawers Included, Open Nchekwa, USB Management Ydị okomoko & Oge a ihe elu Gloss MDF osisi + Tempered iko Isiokwu DIMENSION 1830/2030 / 2230mmL * 400mmW * 420mmH + 1230 / 1360mmL * 600 / 700mmW * 400mmHwe Nkwado nke nha MIRROR gụnyere EE YLỌ Achọrọ AJ RequJ WAR AKA 3 Year Limited (residential), 1 Year Limited (azụmahịa) EXW Price: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (kwuo okwu na ndị ahịa ọrụ)
Nkọwapụta NO YF-H-211 FEATURES Nchekwa, Drawers STYLE Multifunctional & Modern MATERIAL High gloss MDF board + Velvet + Igwe anaghị agba nchara ụkwụ Isiokwu DIMENSION 400mmL x 400mmW x 500mmAnyị ga-akwado OEM nke oke MIRROR gụnyere YES ASSEMBLY chọrọ ikike afọ 3 , 1 Year Limited (azụmahịa) EXW Ahịa: US $ 0.5 - 9,999 / Ibe (ikwu okwu na ndị ahịa ọrụ) Min.Order ibu: 30Piece Tụkwasịnụ Ikike: 10000 Ibe / iberibe kwa ọnwa Port: Tianj ...
Nkọwapụta NO YF-H-206 FEATURES Nchekwa, Drawers, Tempered glass STYLE Multifunctional & Modern MATERIAL High gloss MDF board + Igwe anaghị agba nchara ụkwụ TABLE DIMENSION 420mmL x 420mmW x 420mmH 500mmL x 400mmW x 500mmAnyị ga-akwado OEM nke nha MIRROR INCRYY 3 Year Limited (residential), 1 Year Limited (azụmahịa) EXW Ahịa: US $ 0.5 - 9,999 / Ibe (kwuo okwu na ndị ahịa ọrụ) Min.Order ibu: 30Pieces Tụkwasịnụ Ikike: 10000 Pi ...
Nkọwapụta NO YF-H-201 Atụmatụ Nchekwa, Drawers, Tempered glass STYLE Multifunctional & Modern MATERIAL High gloss MDF board + Igwe anaghị agba nchara ụkwụ Isiokwu DIMENSION 400mmL x 400mmW x 500mmAnyị ga-akwado OEM nke oke MIRROR gụnyere YES ASSEMBLY chọrọ ikike afọ 3 ), 1 Year Limited (azụmahịa) EXW Ahịa: US $ 0.5 - 9,999 / Ibe (okwu na ndị ahịa ọrụ) Min.Order ibu: 30Piece Tụkwasịnụ Ikike: 10000 Ibe / iberibe kwa ọnwa Port ...
A na-eji ngwaahịa kacha mma emepụta ngwaahịa anyị. Oge ọ bụla, anyị na-emezi mmemme mmemme oge niile.
Ngwaahịa anyị nwere ọdịdị mara mma, ịrụ ọrụ nke ọma yana ogo dị elu.
ezi uche ahịa, na-eju afọ mgbe-sales ọrụ, anyị na-na-anabata gị ka ị gaa na anyị factory n'oge ọ bụla ị chọrọ.
Hebei Yifan Wood Industry dị na Quyangqiao, Zhengding County, na-ekpuchi mpaghara nke mita 6,600. Tupu anyị amalite azụmahịa mba anyị, e mepụtala nnukwu ihe n'ọhịa nke Trade na China factorylọ ọrụ ahụ nwere ihe eji emepụta ngwa ngwa, ịwapụ kọmputa, akụrụngwa akụrụngwa isii, akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa si Germany na ngwaọrụ ndị ọzọ buru ibu. . Anyị na-agbaso iwu iwu nchekwa gburugburu ebe obibi ma nwee usoro nhicha nsị. Na August 2019, ụlọ ọrụ mmepụta ihe agbasawanyere, akụrụngwa ahụ emezikwara ọzọ.
Anyị na-elekwasị anya n'inye ndị ahịa anyị ọrụ ...
Ogo bụ Nke mbụ, Teknụzụ bụ ntọala
Anyị setịpụrụ usoro nlezianya dị mma.